Growth Hormone muBangkok. Kushandisa kukura kwehomoni muThailand
Nhasi ndinoda kutaura pamusoro pemishonga inowanikwa vakawanda
chidzitiro chekuvanzika. Ichi chishamiso chemishonga chinonzi - kukura hormone.
Kukura hormone (kukura hormone, STH, HGH, somatotropin, somatropin)
peptide hormone ye lobe anterior ye pituitary gland, yakashandiswa
mumitambo yekugadzirwa kwemisipa musimba. Yakatanga kugoverwa
mu 1956. Une zita rekukura hormone kana somatotropin (kubva muchiLatin
catfish - muviri) nokuti muvechiduku inokonzera kukurumidza
kukura kwemashoko, kunyanya nekuda kwekukura kwemapfupa marefu etura
Kukura kwehomoni kunosunungurwa mumutambo wepituitary mukupindura kune
zviratidzo zve hypothalamus. Anenge makore makumi maviri apera, a
munhu anoderedza kushandiswa kwehomoni iyi nemuviri. Kukwegura kwe
muviri unobatanidzwa nehuwandu hwekuwedzera hormone kubudiswa. Ipapo
yega yega 10 makore yehuwandu hwekugadzirwa kwekukura kwehomoni inowira ne 15%.
Kukura kwehomoni hakuiti zvepabonde kusiyana. Nhamba yake yakafanana
nokuda kwevarume nevakadzi. Pasinei nokuti iko kushandiswa kwezvinodhaka zvine
kukura hormone kunorambidzwa neWADO (World Anti-Doping Organization),
muThailand, mishonga iyi inowanikwa pachena.
Kubatsira kwekukura kwehomoni kunoshamisa - hakuna zvakawanda zve
mitambo yezvokudya, peptides, kana even anabolic steroids. Zvinotendwa
kuti kukura kwehomoni kunobatsira pakuyeuka, kunodzokorora
kukwegura uye kunoita kuti ganda rive duku.
Uyezve, zvakakosha zvakakosha ndezvi: kuderedza kuwandisa kwemafuta emuviri, kuwedzera
mumusasa mashoma, kuderedza muhuwandu hwemakakatanwa nekudzivirira
ramangwana rakakanganiswa, kuwedzerwa kwepfupa rehutano hwemasaga uye
kusimbisa zvirwere zvemuviri.
Inopupurirwa kuti Demi Moore akakurumbira, Robbie Williams naMadonna
akashandisa majekiseni ehomoni, uye Stallone kunyange akawana zvisiri pamutemo
kutakura kwekukura kukuru hormone kuburikidza nemuganhu weAustralia,
rakaunzwa zvakakwana muThailand.
Vanachiremba vanozivikanwa vanoita majekiseni ekukura kwehomoni vanotenda izvozvo
njodzi yevadzidzi vake inongova chinhu chimwechete - kuendesa kune chakaipa. Zvakadaro
kurapwa kwakashata, uye nokutenga hormone paInternet, pane
mukana wekuwana chinhu chisingawanzwisisiki nguva dzose
Kunyangwe kune rumwe ruzivo rwevatsvakurudzi vanoratidza izvozvo
iyo inogadzirisa zvinhu zvechirwere ichi yakanyanyisa zvikuru. Uye
kuti kukura hormone kunogona kukuvadza muviri.
Mune dzimwe mhinduro, HGH inonzi ine migumisiro, iyo inongoratidzika
haigoni kumutsa. Semuenzaniso, kuwedzera mumimba hakune yesayenzi
chisimbiso. Izvi zvinogoneka munyanzvi chete kana kubatanidza HGH ne
steroid uye kudya zvokudya zvakawanda kwazvo
Uyewo, kukura hormone hakuiti hutano hwe testosterone, libido
uye basa repabonde, kusiyana nesteroids. Kukura kwehomoni yevarume chaizvo
akachengeteka maererano nehukama hwepedyo. MuThailand, inotendwawo
kuti HGH inokonzera matumbo, asi izvi zvatove zvichitsoropodza kudzidza. Inogona
kunongomutsa kukurumidza kukurudzirwa kwevevepo maiva nemakumbo (kare
kutanga kwekukura kwehomoni kunokosha kudarika kuongorora
kusanganisa kusimbiswa kwezvinhu zvakadaro).
Kubudirira kwezvinhu zvakawandisa nemigumisiro kana uchishandisa yakakurudzirwa
Dhiyabhorosi inotenderwa yekurasima hormone haigoni. Zvakanaka, nenzira
pamusoro pemigumisiro midiki, tinogona kutaura kuti zviri nyore kubviswa,
kunyanya pasina mishonga.
Kutevera kubva mune izvi, zvinogona kukonzerwa kuti kukura hormone
iri mishonga yakachengeteka. Maererano nevatsigiri vemapurisa kubva kuThailand, 88% yevaya
kutora HGH kufungidzira kuti iri mishonga inoshanda. Uyewo, 86% yakataura chaizvoizvo
mafuta anooneka achipfuta uye pfuma mumusasa mashoma. Kuwedzera kuri
Zviratidzo zvemasimba zvakaonekwa ne 79%. Panguva imwe chete, kupfuura 80% ye
Vakapindura zvakangoerekana nyore mwoyo majekiseni ekukura kwehomoni. Kurutivi
migumisiro yakaratidzwa chete ne23% yevatambi vanoedza kuenzanisa
manzi ehomoni. Chaizvoizvo, chikonzero chikuru chekuuya kwavari
haisi mungozi, asi mutengo wakakwirira uye unofadza wekukura kwehomoni.
Munhu wose anenge asarudza kutanga kutora hormone yekukura anofanira kutora
hazvirevi kungoita chete mari yakakwana (shure kwezvose, hormone
chiito pamwe nekushandisa kamwechete kana kushandiswa mumadhora mashoma haana kusimba), asi
uyewo nezvehutano hwakagadzirwa.